नेपालमा वार्षिक २१ करोडको कण्डम बिक्री ! – Everest Dainik – News from Nepal
नेपालमा वार्षिक २१ करोडको कण्डम बिक्री !
काठमाडौं, फागुन १६ । पसलमा महिला छिन् कि पुरुष हेर्छन्। महिला भए पुरुष ग्राहक आउन्नन्, पुरुष भए महिला। वरपर अरु ग्राहक छन् भने नजिकै आएर चुपचाप उभिन्छन्। जब पसलमा ग्राहक पातलिन्छन्, सुस्तरी माग्छन्, ‘ऊ दिनुस न।’
अधिकांश मेडिकल सञ्चालकले ग्राहकको हाउभाउका आधारमा भाषा बुझ्छन्, प्याकेट सिधै हातमा लिन पनि हच्किन्छन्। पत्रिकाले बेरेर, लुकाएर दिनुपर्छ। स्वाट्ट लिन्छन्, फटाफट हिँडिहाल्छन्। यस्तो व्यवहार देख्दा लाग्छ, ती व्यक्तिले जे किने त्यसको पोल खुल्यो भने बर्बादै हुन्छ। तर किनेका हुन्छन् कण्डम। शहरी दृष्य नै हो यो।
समाज बदलिँदैछ तर शहर होस् या ग्रामीण भेग परिवार नियोजनको साधन कण्डमबारेको धारण उस्तै देखिन्छ। नेपाली बजारमा १५ रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँ मूल्यसम्मका कण्डम पाइन्छन्। नेपालमा प्रयोग हुने सबैजसो कण्डम विदेशबाट आयात गरिन्छ। नेपालमा वार्षीक २१ करोड रुपैयाँ बराबरको कण्डम खपत हुन्छ। यो समाचार शुक्रबार साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।